Kibay zozoro an-kelika, fa tsy hiady… | NewsMada
Tsy miady, tsy miady, nefa ny kibay an-kelika ihany. Na tsy ho aiza tsy ho aiza, nefa mandray basilava… Fomban’ny mpiandry kendry tohina ireo, mitetika hamely am-pitaka, mamono botraka ho mody tsara ivelany…
Tsy izay kosa ny mitranga sy iainana amin’izao fitondrana hafahafa izao, raha ny ady amin’ny kolikoly. Hiady, hiady, ka manao kibay an-kelika. Saingy kibay na langilangy zororo: mirefodrefotra fa tsy mahavoa.
Nahoana? Mandangilangy na mamely amin’ny langilangy isan’andro vaky hoe miady amin’ny kolikoly ny mpitondra, fa tsy hita izay eo. Mbola resaka ambony vavahady sy ambony latabatra aloha izao…
Tsy mbola hita na tsy misy, na tsy ampahafantarina, hatreto izay tena azo amin’ny raharaha kolikoly amin’ny fanondranana harenam-pirenena an-tsokosoko, ohatra. Izay ahina na tratra aza, tafaporitsaka any ivelany.
Matoa anisan’ny fepetra takin’ny mpiara-miombon’antoka ny ady amin’ny kolikoly: tsy mbola misy izany, na tsy mahafa-po. Miara-dalana amin’izany ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana…
Raha tena misy ny finiavan’ny mpitondra amin’ny ady amin’ny kolikoly, miainga amin’izy ireo ny raharaha: tsy fanaovana kolikoly, tsy ananan-kavana na namana ny ady amin’ny kolikoly amin’ny raharaham-pirenena…
Aiza izay eo? Avelao hanao fanadihadiana an-kalalahana eny anivon’ny andrimpanjakana, ohatra, ny Bianco. Izay no (h)atao raha tena vonon-kiady, raha tena tsy misy ny ahiahy tsy ihavanana amin’ny fanaovana koliloly.
Langilangy zozoro ihany ny ady amin’ny kolikoly, raha misy ny lehibe tsy meloka sy ny tsimatimanota. Na tsy atao izay lazaina fa tiana hotanterahin’ny hafa fa tsy hampiharina amin’ny tena. Aiza izay ohatra hotahafina?
Fitaka ny hoe tsy miady, tsy miady, nefa ny kibay an-kelika ihany. Zava-doza noho izany ny hoe hiady, hiady, ka manao an-kelika kibay na langilangy zozoro. Rahoviana vao hiharan’ny lalàna ireo mahabe resaka amin’ny kolikoly avo lenta?